I-China ihlala ibizwa ngokuba ngumzi-mveliso wehlabathi. Ngokuphuculwa kwamandla oqoqosho olubanzi lwase China, ukubakho kweemarike ezinkulu kuye kwenza ukuba intengiso yaseTshayina kufuneka ibonwe ziimpawu zamanye amazwe. Iinkampani zamazwe ngamazwe kunye neempawu zamanye amazwe ziye zangxama ukuya kwimarike yaseTshayina kwaye zanyusa ishishini lezithuthi laseTshayina. Ngophuhliso lwamashishini okubonelela, iNethiwekhi yeFektri yeHlabathi yeFektri ihambisa iintlobo zeemveliso ezizenzekelayo zaseTshayina. I-China iye yaba yindawo yokuhlanganisana yokubonelela ngeemoto zehlabathi kwaye iyeyona ndawo iphambili kubathengi bamanye amazwe.
Ngophuculo lokusetyenziswa okuzenzekelayo, intengiso yezixhobo ezizenzekelayo ifuna isizukulwana esitsha seemveliso zokulandela. Sazise i-TPE ngenaliti yokubumba okusingqongileyo-inobuhlobo iinyawo, kwaye sazala i-TPE yaseJamani kunye neAustria iinyawo zeepads zeenyawo, sizisa amava asempilweni nokhuseleko lokuqhuba kubanini bemoto!
Okokuqala, makhe sithethe ngomahluko phakathi kwenkqubo yokubumba ngenaliti kunye nenkqubo yeblister:
1: Umahluko kwimathiriyeli eluhlaza
Inkqubo yokubumba inaliti kufuneka iphuhliswe ngezinto ze-TPE ezimsulwa eziyi-100%, kwaye inkqubo yeblister ihlala ixutywe kunye ne-TPO okanye i-TPV-efana ne-TPE compounds, kwaye ukusulungeka kweblister akulunganga njengokubumba kwenaliti. Ke ngoko, inaliti enye ebunjiweyo ye-TPE yemoto iya kuba nobhetyebhetye ngakumbi, kufutshane nerabha, kunye nokuziva ngcono unyawo. Iimveliso ezenziwe ngeblister technology zinzima, ziyafana neplastiki, kwaye ziya kuziva zidiniwe xa uqhuba umgama omde.
2: Umahluko wokuqina
Inaliti ebunjiweyo i-TPE yeenyawo zenyawo inokomelela. Emva kokuba ikhubazekile emva kwexesha lokusetyenziswa, inokubuyiselwa kwimeko yayo yoqobo ngokugalela amanzi abilayo okanye ukuyibeka elangeni kangangexesha elithile.
Uvavanyo lwe-DEAO yemoto yokuvavanywa komatshini: buyisela imilo yoqobo emva kweeyure ezininzi zokuvezwa.
I-blister pads iya kuguqa emva kweminyaka eyi-1-2 yokusetyenziswa kwaye ayinakubuyiselwa.
Umahluko phakathi kwezi zinto zimbini uvela:
Imathiriyeli yenqubo yokubumba inaliti ifakwe kumatshini wokubumba wenaliti kwaye inyibilike kubushushu obuphezulu ngaphambi kokuba ifakwe kwisikhunta.
Inkqubo blister kukuba kuqala wenze izinto zibe sheet tyaba, uze ubushushu ukuba ukuthambisa kwaye ukufunxa kwi ukungunda ukupholisa nokuma.
Imveliso elingana nenaliti inemilo yemveliso ngokwayo, ngelixa imveliso yeblister inecala elinye kuphela lemilo ebunjiweyo, kwaye ukubuyiswa kwendalo kuncinci kakhulu kunangaphambili.
Blister iimethi zemoto zabanini bemoto.
3: Umahluko kuyilo lwesimbo
Uncedo lokusebenzisa umaleko ophindwe kabini wenaliti kukuba ubume bomphezulu bunokuyilwa ngakumbi, ukunika abayili indawo ethe kratya yokuyila.
Siyile imibala ekhethekileyo yohlobo ngalunye, kwaye iinkcukacha zityebile, kwaye ubume bento nganye bunelungelo lomenzi emva kwayo.
Ukubumba kweblister kungenza kuphela imigca elula, efanayo.
4: Umahluko kuyilo lwebhaksi
I-bopha ephindwe kabini eyilwe yinkqubo yokubumba yenaliti yomelele ngakumbi. Umazantsi wephedi yonyawo uyilelwe ngezinto ezomeleleyo zokuchasana nokusilela. I-bopha ikwakhona ngenaliti ebunjiweyo ukusuka kumbumba omncinci ochanekileyo, onamandla.
Nangona kunjalo, inkqubo yeblister incinci. Ukuba i-buckle yokwaleka kabini yenzelwe, ukomelela kunye nokuqina kwemethi yemoto luvavanyo olukhulu. Esi sesinye sezizathu zokuba kutheni onke amalahla eeblister zemoto aphesheya engenalo uyilo olungqingqwa kabini.
Okokugqibela, kutheni uDeao enyanzelisa ekwenzeni inaliti enye ebunjiweyo ye-TPE ukhuko lwemotos?
Kuba i-DEA ibisoloko inobutyebi bamava kuphuhliso lweemethi zemoto zoqobo! Sifuna ukuzisa iimethi zemoto ezingcono kuninzi lwabanini bemoto. Kuphela yimveliso yefektri yenqanaba elidityanisiweyo lenziwe ngenqwelo-moya ebunjiweyo ye-TPE enokuzisa amava okuqhuba okusingqongileyo kunye nevumba elingenalo ivumba.